युगसम्बाद साप्ताहिक - सानो कुरामा खुसीले उफ्रने हामी
Thursday, 05.28.2020, 02:56am (GMT+5.5) Home Contact
सानो कुरामा खुसीले उफ्रने हामी
Tuesday, 04.03.2018, 01:45pm (GMT+5.5)
सानोसानो कुरामा खुसी हुने तर ठूलो विपत्तिमा धैर्यधारण गर्ने नेपाली स्वाभव विचित्रको छ । बिरालोले मुसा मा¥यो भने त्यो आश्चर्य हुँदैन, तर मुसासंग दोस्ती गरेर भकारी रित्याउन सघायो भने त्यो आश्चर्य हुन्छ । अर्थात् प्राकृतिक, कानुनी नियम विपरीत गयो भने त्यो अनौठो र आलोच्य विषय बन्छ । किनभने हरेकको आआफ्नो काम र जिम्मेवारी हुन्छ ? त्यस्तो जिम्मेवारी प्रकृतिले निर्धारण गरेको हुन्छ, कानुनले तोकेको हुन्छ, अनि जनताले अपेक्षा गरेका हुन्छन् ।
माथि सुरूवात नै बिरालो र मुसाबाट गरियो । बिरालोलाई विकास, सुशासन, स्थिरता अनि समृद्धि र भ्रष्टाचार अनि मुसालाई भ्रष्टाचार, कुरिती, अस्थिरताको प्रतीक मानेर यो आलेख अघि बढाइन्छ । प्रकृतिदेखि कानुनसम्मले, मतपत्रदेखि जनविश्वासले दिएको अधिकार र व्यवस्था अनुसार हरेकले काम गरिरहेको हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ आफूमा भएका क्षमता र गुण अनुसार मानिस मात्र हैन पशुपक्षी, जनावरले समेत त्यो भूमिका निर्वाह इमानदार भएर निर्वाह गर्छन् । यदि त्यसो गर्न नसके उसको अस्तित्व सकिन्छ ।
तर, नेपाल अपवाद हो यस मामलामा । नेपालका काम हैन, गफ गर्न सक्नेहरूको मात्र अस्तित्व छ । वडाको सानो तहदेखि सिंहदरबारसम्मै यस्तै गफाडीहरूको हालिमुहाली लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । काम गर्न नसक्नेहरूकै हैकम छ । काम गर्ला जस्तोको चर्चै छैन । उनीहरूलाई कसैले अवसर दिंदैनन् । यस्ता उदाहरण अनगिन्ती छ । अर्थात् मुसामार्ने बिरालोहरू किनारा लागेका छन्, मुसासंगै मिलेर धान खानेहरू भकारीको वरिपरी छन् ।
प्राकृतिक नियम अनुसार बिरालोले मुसा मार्न छाड्यो भने बिरालोको अस्तित्व सकिन्छ । त्यस्तै तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन भने कुनै ओहदामा बसेको मान्छे असक्षम हुन्छ, उ त्यो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन्छ र हुनुपर्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो छैन । जतिसुकै नालायक भए पनि उनीहरू टिकिरहेका छन् । हामीले नेता मानिरहेका छौं । मुसामार्न छोडेर मुसासंगै दोस्ती गरेर भकारी रित्याउने बिरालोबाटै आश गरिरहेका छौं । उसलाई बिरालो नै भनिरहेका छौं ।
जनताले विकास होस्, समृद्धि आओस् शान्ति सुरक्षा कायम होस् भनेर नेता चुनेर पठाउँछन्, तर उनीहरू आफ्नै समद्धिमा केन्द्रित हुन्छन् । जनताको समृद्धि भगवान भरोसा, विकास उनीहरूकै परिवारको मात्रै हुन्छ, शान्ति उनीहरूको घरमा मात्रै छाउँछ । देशरूपी भकारीको वरिपरी बसेर मुसाहरूसंग दोस्ती गरेर भकारी रित्याउनेहरूको शिकार बनेका हामी नेपालीहरूका लागि कुनै एउटा बिरालोले मुसा मा¥यो भने त्यो आठौं आश्चर्य हुने गरेको छ ।
मुसा मार्ला, भकारीको धान जोगाउला भनेर दूध खुवाएर पालेको बिरालो मुसासंग दोस्ती गर्न थाल्यो भने घरमालिकको के हाल होला ? अहिले नेपाली जनताको त्यस्तै हाल भएको छ । त्यसै भएर त कुनै एउटा मन्त्री, सचिव, निर्देशक वा प्रहरी अधिकृतले केही राम्रो कामको संकेत मात्रै दियो भने हामी तीन हात उफ्रिएर उसको पक्षमा नारा लगाउँछौं ।
यो किन भयो ? उत्तर सहज छ– सबै बिरालोहरू मुसासंग मिलेर भकारी रित्याउन लागिपरेका बेला केही त्यस्ता मुसा देखिए जसले भकारी जोगाउन मुसा मार्ने संकेत गरे । नेपालमा दशकौंको बीचमा एउटा त्यस्तो बिरालो देखापर्ने गर्दछ जसले मुसा मात्रै मार्छ । नत्र मुसामार्ने आशमा पालिएका बिरालो सबै मुसासंग दोस्ती गरेर भकारी रित्याउने र टन्न खाएर चौबीसै घण्टा सुत्ने भए ।
एउटा प्रहरी अधिकृतले अपराधीलाई कुनै हालतमा नछोड्ने अडान राख्दै समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न थाल्छ भने हामी उसको वाहवाही गर्छौं । यथार्थमा ती प्रहरी अधिकृतको काम नै त्यही हो । अर्थात्, ऊ मुसा मार्ने बिरालो नै हो र बिरालोले मुसा मा¥यो भनेर हामी दंग पर्छौं । अब केही हुन लाग्यो भन्छौं ।
एउटा मन्त्रीले आफू मातहतको निकायबाट जनतालाई बढीभन्दा बढी सुविधा दिन्छु भनेर काम गर्दा हामी उसको जयजयकार गर्छौं । कारण यसअघि त्यस्तो गर्ने मन्त्री नै थिएन । वास्तवमा ती मन्त्री पनि त्यही काम गर्छु भनेर त्यहाँ पुगेका हुन् भने उनले त्यस्तो काम गर्दा अनौठो र आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरै थिएन । तर यहाँ यस्तै छ । अनौठै मान्नुपर्छ । जिम्मेवारी पाएकाहरू बेजिम्मेवार भएपछि सानोतिनो नतिजामै हामी खुसी हुनुपर्ने बाध्यता छ ।
विकासको मोडल पश्चिमबाट सिकिन्छ, राजनीतिक नारा पश्चिमबाट भित्र्याइन्छ । उनीहरूको नीति–निर्देशन र अनुदानमा मुलुक चलाइन्छ । तर, ती देशको विकासको मोडल सिके पनि काम भने सिकिंदैन । पश्चिमको विकास चासो र हाम्रो चासो आनको तान फरक छ । उनीहरू स्वीच थिचेको भरमा जनताले चाहेको सुविधा उनीहरूको घरमा पुर्याउने कल्पना गर्न थालेका छन्, हामी अझै सार्वजनिक धारामा अल्झिरहेका छौं । त्यसमा पनि भ्रष्टाचार, दुराचारको भेल छ । मुसा मार्ला भनेर पठायो, मुसै बनेर निस्कन्छ । अनि एउटा बिरालोले मुसा झम्टिए मात्रै पनि हामी खुसी हुन्छौं । हाम्रो नियति योभन्दा माथी उठ्ने कहिले ?